Ioli efunekayo yemononi
Ioli ye-lemon ebalulekileyo yilwelo oluhlaza okanye oluphuzi olunomzimba obandayo obunobumba obuqhenqileyo. Itholakala kwi-peel peel okanye i-pericarp entsha ngokukhenkca kubanda okanye kwi-distillation. Ioli iquka i-terpene, i-citral, i-limonene, i-linalol kunye nezinye izinto.
Iipropati zeoli efunekayo
Olu hlobo lweoli luyinto enye eyaziwayo kwaye ithengiswe. Oku kulungelelweyo ngokusetyenzwa kwezinto ezizodwa kunye nokuphilisa. Isetyenziswe kwiindawo ezahlukeneyo ze-cosmetology, i-perfume, iyeza, i-aromatherapy, ukupheka nabanye.
Okokuqala, iiphilisi zeelmon kunye neoli kwiziko zazo ziyaziwa kakhulu ngenxa yezifo zentsholongwane kunye nokuphefumula, njl njl. Isebenza ngokuthe ngqo kwiimpembelelo ze-herpes, i-hepatitis nezinye izifo ezifanayo, njengoko inokuthi i-antiviral effect effect.
Kwakhona, ioli iyanceda kwizifo ezibangelwa yi-bacilli tuberculous, staphylococci, streptococci kunye ne-meningococci, ngenxa yezinto zayo zokulwa ne-antibacterial.
Ngenxa yokuba ioli ye-lemong iqukethe i-coumarins ehlenga igazi, inceda ekuvuseleleni inkqubo yokujikeleza kwegazi kunye negalelo ekuhlaziyweni okutsha kweempahla ezincinci.
Ngokuncediswa kwesi sixhobo unokukunqoba uxinzelelo, ukhusela izifo ze-psychosomatic, ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ukuphakamisa umgangatho wamandla engokwenyama nengqondo.
Sekuninzi ixesha elidlulileyo ioli lemon isetyenziswe njengendlela yokulungisa amacope, ama-worms kunye namanye ama-parasites emathumbu.
Ukusetyenziswa kweoli kunomphumo onobuncedo kumsebenzi wesibindi, ukunciphisa ukuhamba kwegazi kwisibindi kunye nokusebenza njengento evuselela ngokubanzi. Eyona nto isebenzayo kunye kunye ne-vegetovascular dystonia, i-normalizing blood pressure, ukunciphisa izinga le-cholesterol kunye ne-prothrombin elinegazi, inceda ukukhusela ukukhula kwe-atherosclerosis. Zonke ezi zikhankanywe ngasentla zikhokelela ekubeni esi sixhobo sinconywa ngoogqirha ngenjongo yokukhusela nokukhusela izifo zesimo senhliziyo.
Ngeenjongo zonyango, ioli ye-lemon ebalulekileyo isetyenziswe kwiindidi ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa iindlela ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwisifo - ngendlela yokufumba, ukuhlamba, ukuxubha, ukuhlamba, ukutshitshiswa nokufuthwa ngaphakathi.
Ngaphakathi, i-oyile isetyenziselwa izifo ezinjengeentloko, umfutho wexinzelelo, i-cholelithiasis, i-atherosclerosis, ukutyhefu kokutya, kunye nokulahleka kwesisindo. Kwiimeko ezinjalo, ioli ithathwa kabini ngosuku, enye ityeke kwijusi, itiye, iswekile okanye ubusi.
Iphunga eliqhayisayo le-lemon likhawuleza liphakamisa imvakalelo, ikhuthaze kunye neentsimbi. Kuya kukunceda ubuyele emsebenzini nasemsebenzini wobomi kwakhona. Amagciwane ayo achaphazelekayo aya kunceda ukutshintsha umoya. Ukongezelela, ioli yemononi iya kunceda i-ants zasekhaya kunye neenundu.
Ukusetyenziswa kweoli lemon kwi-cosmetology
Namhlanje, leoli idla ngokusetyenziswa njenge-cosmetic engenakulinganisekanga, kunye ne-detoxification, i-antiseptic, i-white-effect, iyamhlophe, ithambisa kwaye ivuselele isikhumba. Unophilisa izixhobo, unceda ukususa iintlanzi kwesikhumba, ukunciphisa ukuhlukana kwezipikili. Ingasetyenziselwa nje njengemveliso yokunyamekela izinwele - ioli lemon inikezela iinwele zendalo kwaye zikunceda ekulwa ne-dandruff. Ukuba unqwenela, ingasetyenziselwa njengeoli ye-massage.
Ioli efunekayo yemononi inokukunceda kunye nokuchasana - kufuneka uhluthe kabini ngeveki ubuso beoli kunye nesongezo. Ukunciphisa ukuhlukana kwezipikili kuya kunceda izicelo zansuku zonke ngeveki, kunye nokubanika imbonakalo enempilo.
Ukunika iinwele ezinqabileyo ukukhanya kwezinto eziqhelekileyo kuya kunceda le mpendulo. Ukufezekisa oku, kufuneka uhlanjululwe iinwele zakho ngokushushu ngamanzi ashushu, ungeze amaconsi ambalwa eoli. Kubukeka buhle kakhulu kubantu abanezinwele ezimhlophe - bafumana umthunzi ogqamile emva kwenkqubo. Ioli iyimfuneko yokunciphisa amanzi, kunye neenwele emva kokuhlamba ziba ziluhlaza kwaye zithobele.
Izifo Zesibhinqa: Ulwabiwo lwezityalo
Iichupsi, izilwanyana zomntu
Kulula kangakanani ukuyeka ukutshaya?
I-mushroom ye-Chaga, izakhiwo kunye nezixhobo ezixhamlayo
Unyango lwefuthe lokukhwehlela izikhumbuli zabantu
Izifo ezigugu, ukuxilongwa kwezifo
Indlela yokugcina impilo xa kwenzeka uxinzelelo
U-Anna Sedokova uye wagqiba isigqibo kumyeni wakhe wesithathu, isithombe
Ukunquma kwexesha kunye nesisindo
Umfanekiso wesetyhini samashishini anamhlanje
Matryoshka-Intengiso eSt. Petersburg
Ukuba umntu onjalo uphupha, kuthetha ntoni?
I-Ectomorph, i-mesomorph, i-endomorph-indlela yokwazi ukuba ungubani?
Ukunyamekelwa kwesikhumba ngeendidi ezininzi
Indlela yokufundisa umntwana ukuba asele kwibhotile?
Ukunyamekelwa kwesikhumba ngemibimbi
Umthendeleko woNyaka omtsha: njani ukugcina impilo enempilo?
Indlela yokufunda i-eyelashes enombala enhle
Indlela yokugcina imali ngomvuzo omncinci
Indlela yokukhetha i-ambulera
Ukunakekelwa kwamehlo ebusika: i-mask ekondla kwesikhumba esomileyo